Miui ဂီတဖွင့်စက်ကို Android နှင့်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနည်း | Androidsis
Miui ဂီတဖွင့်စက်၊ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်
Francisco Ruiz | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ
ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့နောက်ထပ်ပို့စ်တခုမှာငါတင်ပြပြီးပြီ Launcher သို့မဟုတ် application launcher လုံးဝအခမဲ့, ငါတို့ပေးနိုငျသော Miui roms များ၏ဇာတိကြည့် operating system ကိုအတူမည်သည့် device ကိုရန် အန်းဒရွိုက်, ထို installation လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီ။
ယနေ့ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကို roms များ၏မူလဂီတလျှောက်လွှာကိုမိတ်ဆက်မည် MIUI, Miui ဂီတဖွင့်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောအပြည့်စုံဆုံးကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့.
သင်၏လျှောက်လွှာကိုသင့် operating system တွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုပါက၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည် နာလန်ထူ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်မဆိုမှန်ကန်သည် အမြစ်တွယ် ပြီးတော့သင် install လုပ်ပြီ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသူဗားရှင်းရိုက်ကူးကြောင်း Android 4.0.3 နှင့်အထက်.
ဒီ application ကိုအောက်ပါဆိပ်ကမ်းများနှင့် roms အပေါ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်:
Nexus S သည်
AOKP, CM9 Kang, CM9 Nightly's, Codename Android နှင့် AOSP Stock roms အောက်တွင်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
Rom အောက်တွင် cyanogenMod9ကိုအခြေခံပြီးစမ်းသပ်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
CM Optimus (CyanogenMod 9) Thx အောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီး DJ Optimus One သို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
သင်ဤလျှောက်လွှာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးသင်၏ terminal တွင်ကြိုးစားလိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည် installation ခြေလှမ်းများကိုအောက်ပါ ငါအောက်မှာအသေးစိတ်။
1 Miui Music Player ဗားရှင်း 2.3.2 zip installation နည်းလမ်း
2 ပြုပြင်ထားသော Recovery မှလိုက်နာရန်အဆင့်များ -
Miui Music Player ဗားရှင်း 2.3.2 zip installation နည်းလမ်း
ပထမ ဦး စွာဖြစ်လိမ့်မည် ဒီနေရာကနေလျှောက်လွှာ zip ကို download လုပ်ပါတစ်ချိန်က download လုပ်ပြီး ကျနော်တို့ decompressing မပါဘဲကူးယူပါလိမ့်မယ်တိုက်ရိုက်ရန် sdcard ပါ ကျွန်တော်တပ်ဆင်လိုသည့်စက်၏၎င်းကိုထပ်မံဖွင့်ရန်ပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အသုံးချပရိုဂရမ်၏တပ်ဆင်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ထံမှလျှောက်လွှာကို install လုပ်တဲ့အခါ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူဒီဟာသွားလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်၌တောက်လောင်နေသော rom နှင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်အလားကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ပြုပြင်ထားသော Recovery မှလိုက်နာရန်အဆင့်များ -
cache ကို partition ကို Wipe
အဆင့်မြင့် / dalvik cache ကိုသုတ်
sdcard မှ zip ကို Install လုပ်ပါ
sdcard မှ zip ကိုရွေးပါ
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဇစ်ကိုရွေးချယ်သည် Miui ဂီတဖွင့်စက် ကျနော်တို့က၎င်း၏တပ်ဆင်အတည်ပြုပါ။
ယခု reboot system ကို
Terminal ကို restart လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ device နှင့်သင့် rom သည်သဟဇာတဖြစ်ပါကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် application ကိုမည်သို့ install လုပ်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ Miui ဂီတဖွင့်စက်.
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, သင်သည်စနစ်စတင်နှင့်ကြည့်ရှုသောအခါ app အံဆွဲ သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့လျှောက်လွှာကိုသင်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ၊ အဲဒါဟာသင့်ရဲ့စနစ် (သို့) သင့်ရဲ့ rom ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ကသဟဇာတမဟုတျပါ ဒီ app နှင့်အတူ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - MIUI V4 ၏ကိုယ်ပိုင် MiHome Launcher သည်ကိရိယာအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်
ရင်းမြစ် - Miui စပိန်, တောင်သူလယ်သမား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခမဲ့ဂီတ » Miui ဂီတဖွင့်စက်၊ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်
Javi - Montero ဟုသူကပြောသည်
ဒီဟာက Bootloader အတွက်ပိတ်ထားတာလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Javi ☆ Montero အားပြန်ပြောပါ
Korn FlekltOzz ဟုသူကပြောသည်
1 ကနေ 10 an 8 ထိအများကြီးကျွန်တော်သံသယရှိတယ်၊ သင်၌ CWM သို့မဟုတ်အလားတူတစ်ခုခုရှိရမည်။ သို့သော်သင်ကစက်ရုံမှမဖြစ်သင့်ပါ၊
Korn FlekltOzz သို့ပြန်သွားပါ
သင်၏ Android ကို Launcher7ဖြင့် ၀ င်းဒိုးဖုန်းနံပါတ်မည်သို့ပုံဖော်မည်နည်း
xDadevelopers တွင်ရရှိနိုင်သည့် YoutubeDownloader Apk